Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-USA ezaphulayo » Inyikima enamandla inyikima usingasiqithi weAlaska
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • Xanduva • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Inyikima enamandla inamatye eAlaska
I-peninsula yindawo ye-seismic hotspot, kwaye ihleli ngaphezulu kwendawo yokuhlangana ye-North Pacific kunye ne-North American tectonic plate.
Inyikima eyomeleleyo yahlasela usingasiqithi weAlaska.
Inyikima inyikima indawo yokuhlala yasePerryville.
Akukho kufa, ukwenzakala okanye umonakalo owenzekileyo.
I-US Geological Survey (i-USGS) inika ingxelo yokuba inyikima eyomeleleyo ibethe i-Alaska Peninsula ngentsasa yangoMgqibelo.
The I-USGS ilinganise inyikima ikwe-6.9 kwisikali sokulinganisa, inqanaba elihlelwe njengelomeleleyo kunye neqhezu lenqaku elingaphantsi "kweyona inkulu."
Inyikima, eyayinokulinganisa indawo eyakhiweyo, iyishukumisile indawo yokuhlala yasePerryville, kwingingqi ezele zizenzo zenyikima.
Inyikima yahlasela kanye elunxwemeni lwe I-Alaska Peninsula, umzila omxinwa womhlaba kunye neziqithi ezithi zivele kumhlaba omkhulu waseAlaska zingene kuLwandlekazi lwePasifiki zisinge eRashiya. Ipeninsula inabemi abambalwa, kwaye eyona dolophu ikufuphi kwindawo enenyikima yiPerryville, indawo yokuhlala yabantu abamalunga ne-100, ebekwe malunga neekhilomitha ezingama-85 (136km) ukuya emantla ntshona.
I-peninsula yindawo ye-seismic hotspot, kwaye ihleli ngaphezulu kwendawo yokuhlangana ye-North Pacific kunye ne-North American tectonic plate. Ikhaya leentaba-mlilo ezininzi, kwaye zihlala zibona iinyikima ezinkulu. Ekupheleni kwenyanga ephelileyo inyikima enkulu eyi-8.2 yafika kwindawo enye eyabethwa yinyikima yangoMgqibelo, yaza yalandelwa ziinyikima ezintathu ze-5.9, 6.1, kunye ne-6.9. Le nyikima yayiyeyona inkulu ehlasela i-United States ukusukela ngo-1965, kwaye yeyona inkulu kwimbali yehlabathi ukusukela ngo-2018.
Oktobha 22, 2021 kwi-09: 37
Enkosi ngesithuba esihle kakhulu. Ndiyathemba ukuba uya kuqhubeka nezihloko ezinjalo. Ndikunqwenelela impumelelo. Enkosi
[url=https://i2m3.com/”] شات ذهب[/url]
This New Day at UNWTO is a Giant Step for Travel, Tourism, and the World Economy Disemba 2, 2021